बेंसीशहर, लमजुङ । बेंसीशहरको मध्यभागमा रहेको लक्ष्मीनारायण मन्दिरभित्रको सक्कली शिला चोरेर नक्कली फिर्ता भएको छ । मन्दिरभित्र रहेका ४०० वर्ष पुराना शालिग्रामका शिला एक महिनाअघि हराएको थियो ।
बेंसीशहर नगरपालिका वडा नं ८ मा रहेको नारायण मन्दिरभित्रको शालिग्रामका शिला एक महिनाअघि नै चोरी भएको भए पनि पछिमात्रै चर्चामा आएको हो । गत मंसिर २२ गते शिला हराएको र तत्काल मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई जानकारी गराएको मन्दिरका पुजारी सोमराज घिमिरेले बताउनुभयो । “गत मंसिर १९ गते मैले शालिग्रामका शिला पूजा गरी नुहाएर राखेको थिएँ, २१ गतेसम्म शिला थियो”– पुजारी घिमिरेले भन्नुुुुभयो, “२२ गते पूजा गर्न खोज्दा भेटिएन, मैले तत्काल समितिलाई जानकारी गराएँ ।”
मन्दिरको तोडफोड नगरी शिला हराएको हुँदा समितिभित्रका मध्येबाट नै चोरी भएको हुनसक्ने आशंका गरिएको छ । शिला हराएको अघिल्लो दिन समिति सदस्य एवं पण्डित बालकृष्ण सुवेदी मन्दिरभित्र छिरेको र पण्डित सुवेदीले नै शिला चोरेको पुजारीको आरोप छ । “शिला हराएको अघिल्लो साँझ सुवेदी गुरुले मन्दिरको साँचो माग्नुभयो, मैले आनाकानी गरेको थिए ।” घिमिरेले भन्नुभयो, “सबैले मानिआएका गुरुले भगवान्को दर्शन गर्नुछ”– भन्नुभयो गुरुले माग्दा के नदिनु भनेर साँचो दिएको हुँ ।”
चोरी आरोपित पण्डित सुवेदीले आफूले शिला चोरी नगरेको दाबी गरेका थिए । तर आफूमाथि आरोप लागेपछि २४ थान शालिग्राम शिला मन्दिर व्यवस्थापन समितिलाई बुझाएको समिति सदस्य नरहरि वाग्लेले बताउनुभयो । पण्डित सुवेदीले बुझाएको शिला नक्कली भएको वाग्लेको भनाइ छ । “उहाँले शिला चोरेको होइन पनि भन्नुहुन्छ । “फेरि समितिलाई २४ थान बुझाउनुभयो”– वाग्लेले भन्नुभयो, “उहाँले बुझाएकामध्ये तीन÷चार वटा सक्कली शालिग्राम हो अरु सबै नक्कली हो ।” मन्दिरको समिति, पुजारी, भक्तजन, स्थानीय र प्रशासनसहितको संरक्षणमा रहेको मन्दिरबाट शालिग्राम हराउनु र सबैजना मौन रहनुमा कुनै रहस्य भएको स्थानीयको गुनासो छ ।
मन्दिरमा रहेका पुराना र महत्वपूर्ण शालिग्राम शिला चोरी भएको एक महिना पूरा भइसक्दा पनि समितिले कतै उजुरी नगर्नु कारबाहीको प्रक्रिया अघि नबढाउँदा स्थानीय आक्रोशित भएका छन् । दोषीलाई तत्काल सार्वजनिक गरी कारबाही गर्नुपर्ने उनीहरुको माग छ । “चोर पनि पत्ता लागिसकेको छ, समितिले न घटना सार्वजनिक गर्छ न चोरलाई कारबाही गर्छ”– स्थानिय कृष्णलाल प्रधानले भन्नुभयो, “समितिका मान्छेको पनि मिलेमतो हुनुसक्छ, हामी यसलाई गुपचुप हुन दिँदैनौँ, दोषीलाई कारबाही हुनैपर्छ ।”
प्रकाशित : सोमबार, पुष २४, २०७४०९:४८
बसको ठक्करबाट पैदलयात्रु विनोद गोलेको मृत्यु
राजधनीमा धरिलो हतियार प्रहार गरी पुरुषोत्तमको हत्या !
अब मदिरा बिक्री वा सेवन गरेमा मात्रै पनि पाँच सय जरिवाना
प्रधानमन्त्री ओली रात्रिभोजमा सहभागी !
मोटरसाइकल चोरी गरि पहाडी क्षेत्रमा लागि बिक्री गर्ने गिरोह पक्राउ